“အတွေးစလေးတွေ”: ဗုန်းမှန်လို့ဖြင့် မပျက်နိုင် . . .
Posted by Han Kyi at 12:47:00 pm
ဆြာဟန် ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ဦးနော်..အမြန်နေကောင်းပြီး ပို့ စ်တွေ တဂျိမ်းဂျိမ်း ရေးနိုင်ပါစေဗျား...
7 October 2013 at 06:46
နားနားနေနေ နေပါဦးတော့လား ဆရာ ....
ကလေးတွေကို စာသင် တာကလည်း သင်တာပေါ့ အဖျားပျောက်သွားပြီ ဆိုရင်တောင် နားနေ သင့်သေးတယ်
ကျန်းမာရေးကိုတော့ ဂရုစိုက်ပါ ဆရာ ။
ထုံးစံကို ဗုန်းမှန်လို့ မပျက်တာ မပြောနဲ့လေ
အကြိုက်ချင်းမှ မတူတာကလား ။
သွေးနဲ့ကိုယ် သားနဲ့ကိုယ် ဖွဲ့တည်ထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမို့ ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်တာ သဘာဝပေါ့ သိတ်လည်း အားမထည့်ပါနဲ့ ဆရာဟန်ရယ်...စိတ်ရဲ့ပြေရာပြေကြောင်းလေးကို ကိုယ်နှစ်သက်တာလေးနဲ့ ဖြေသိမ့်တာတော့ အကောင်းဆုံးပါလေ..
8 October 2013 at 01:32
စာသင်တာကို.. ဟိုစဉ်က ဝါသနာ ပါလွန်းခဲ့ပါ့ . ဒါပေမယ့် အခုတော့လည်း.. အဲဒီ ဝါသနာ မဖြစ်နိုင်မှန်း သိလို့ လက်လွှတ်ခဲ့ပြီးခဲ့ပြီ... ဘာပဲ ပြောပြော.. အူးဟန်ကြည်ရေ.. လေးစားအားကျတဲ့.. အဲဒီလောကထဲက အူးဟန်ကြည်တစ်ယောက်.. အမြန်ဆုံး နေထိုင်ကောင်းပြီး..တပည့်များနဲ့ အတူ.. အမြဲ ပျော်ရွှင်နေနိုင်ပါစေဗျာ..
ကျန်းမာရေးတော့ ဂရုစိုက်ပါ ဆရာ ဟန်ကြည် .... ။
ရာသီ က လည်း ... မိုးအကုန် ဆောင်းအကူး တုပ်ကွေးတွေ
ဖြစ်လိုက်ကျတာ ... တော်တော် ဖျားခဲ နာခဲတဲ့ သူတွေပါ
ခေတ်မှီကုန်ကြရော ... ပြောရမလားပါပဲ ....
ဧည့်သည်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ဖြင့် အိမ်ရှင်နေကောင်းနေပါစေသောဝ် ... :)
ဖျားတာဝမ်းသာလို့ ရယ်သွားတယ်တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ ။
ဆရာ့အနားယူတဲ့ထုံးစံလည်း..ဗုန်းမှန်လို့ ပျက်နုိုင်ပါ့မလားလို့ ..မဒမ်ကြည့်ဖက်ကလိုက်တွေးသွားတယ်။ ...း)
အော်... ဆရာဟန်တစ်ယောက် အတော်လေး ဟန်ချက်ပျက်ခဲ့သကိုး။ သူကြီးမင်းကတော့ မဖျားမနာတာ ဆယ်စုနှစ် ကျော်လာပြီထင်ပါရဲ့။ မေ့တောင်နေပြီ။ နဲနဲ ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက် ဖြစ်လာရင် ရေတန်းချိုးပစ်လိုက်တာဘဲ။ သူကြီးမင်းဆေးက ရေချိုးခြင်းပါဘဲ။ အရမ်းချမ်းရင်လဲ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ချိုးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားရော။ အဲ.. ရေမချိုးဘဲ နေမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်လတစ်ခါ ပုံမှန် ဖျားလောက်မယ်ထင်တယ်။ နေမထိထိုင်မသာနဲ့။ ရေးချိုးလိုက်မှ အကြောတွေ အချဉ်တွေ ပွင့်ထွက်ကုန်ပြီး ဓါတ်ကြီးလေးပါး မျှတလေ့ရှိတဲ့ သူကြီးမင်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်။ ဒီလောက် အေးတဲ့ အရပ်မှာ နေတာတောင် ရေချိုးတစ်ရက် မပျက်ခဲ့သေးဘူး ဆရာဟန်ရေ။
ဆရာဟန်လဲ ကျန်းမာရေးတော့ ဂရိုစိုက်ဦး။ တော်ကြာ တပည့်တွေ ပျော်ပေါက် ဖြစ်နေဦးမယ်။း)
12 October 2013 at 04:33